Faha-15 taonan’ny TIM : Ny fanjakana no mpanakorontana eto hoy Ralipo | Ny Valosoa Vaovao
Faha-15 taonan’ny TIM : Ny fanjakana no mpanakorontana eto hoy Ralipo
Nandritry ny fanehoan-kevitr’i Rakotomamonjy Philippe, na Ralipo, mpahay toekarena sady mpanao pôlitika ihany koa, fa ny fanjakana mihitsy no mpanakorontana eto. Nahoana no omeko tsy omeko hoy izy, ka omena alàlana, dia avy eo indray tsoahina? Tsy vitan’izany hoy izy, fa mampiady vahoaka mihitsy satria voakorontana hatramin’ny sain’ny olona mihitsy. Efa namoaka didy ny fitsarana miady amin’ny fanjakana, fa é!e!, ny azy ihany no marina satria matahotra an-dRavalo. Milaza fa afaka mifanakalo hevitra ny fanjakana hoy izy, nefa izy no tena mpanakorontana sy mila ady fotsiny izao. Tsy vitan’izany hoy izy fa mbola amporisihana koa ny mpamadika palitao toa an’i Olivier Rakotovazaha hiady amin’ny olon’ny Tim.
Tsy izy ihany fa ireo olona mpamadika palitao toa an-dry Faberger ihany koa dia mody ampitenenina daholo sitrany ahay handoto rano ny Tim. Lazaina ihany koa fa nanentana olona Ravalo hoy Rakotomamonjy Philippe, nefa ny vahoaka mihitsy no efa leon’ny kobaka am-bava sy ny lainga tsara lahatry ny mpitondra HVM mpampiesona. Angaha moa afaka hanidina miainga eny amin’ny Carlton Ravalo hoy ity mpandraharaha ity ka tsy handalo ho hitan’ny olona eny an-dàlana dia lazaina fa mitarika vahoaka hikomy. Na izany na tsy izany anefa hoy ity mpanao pôlitika ity, dia tsy maintsy mandresy Ravalo amin’ny fifidianana filoham-pirenena, ary vonona ny vahoaka hifidy azy satria latsaka lalina loatra ny fahantran’ny vahoaka malagasy ankehitriny.